Smith Girls Shack 1 Cowes INDAWO! Ilinen iqukiwe - I-Airbnb
Smith Girls Shack 1 Cowes INDAWO! Ilinen iqukiwe
Ungashiya imoto yakho emnyango njengoko singaphantsi kwemizuzu eyi-2 sihamba ngeenyawo ukusuka embindini weCowes Main Street nazo zonke iivenkile zayo ezintle neekhefi. Kwaye ngaphantsi kwemizuzu eyi-2 xa uhamba ngeenyawo ukuya elunxwemeni onokulibona ukusuka kumgangatho ongaphambili.
Kukho amagumbi okulala ayi-2, onke enxibe iigawuni. Igumbi lokulala eliyi-1 linebhedi enkulu ibe igumbi lokulala eliyi-2 linebhedi elala abantu ababini.
Inkundla ibiyelwe ngokupheleleyo kwaye ineshawa ephandle (emnandi emva kosuku elunxwemeni), indawo yokubeka itafile ephandle, indawo yokuphumla yangaphandle kunye neengubo.
Yonwabela iglasi yewayini okanye isidlo kumgangatho ongaphambili onetafile nezitulo ngoxa uphola emanzini.
Kukho indawo yokupaka eyi-1 emnyango wangaphambili kunye nendawo yokupaka eyaneleyo esesitratweni ngqo ngaphambili xa uneemoto ezingakumbi.
Ukuba ungathanda ukujonga u-Shack 2 umnyango olandelayo, cofa ilinki engezantsi.
https://www.airbnb.com/h/smith girlsshack2 NCEDA UQAPHELE ukuba sinepolisi engqongqo yokungabikho kweepati kwaye asizamkeli ii-schoolies.
Zive ukhululekile ukundibhalela okanye undifowunele nangaliphi na ixesha ngexesha lokuhlala kwakho ukuba ufuna uncedo.